फेसबुक अकाउन्ट यसरी सुरक्षित पार्नुहोस्
मगलवार, असार १७, २०७६ सेतोखरी
यस परिप्रेक्ष्यमा फेसबुकले प्रयोगकर्ताको फेसबुक खाताको सुरक्षाका लागि केही विशेष टूल्स उपलब्ध गराउन समेत सुरु गरेको छ । यस्ता टूल्सको प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताले फेसबुक अकाउन्टबाट डाटा लिक हुने तथा ह्याकिङ्ग हुने जोखिमबाट बच्न सक्दछन् । फेसबुकका सेफ्टी टूल्स के के छन् र त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? केही टिप्स यस्ता छन्ः-
-न्यूज फिडलाई पर्सनलाइज्ड गर्नुहोस्ः यसको सहायताले तपाइँले आखिर किन तपाइँको फेसबुकमा कुनै खास प्रकारका पोष्टहरु मात्र धेरै देखिन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । फेसबुकले यस्ता पोष्ट कम गर्नका लागि केही शर्टकट्स दिएको हुन्छ । त्यसको प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो न्यूजफिडलाई आफ्नो मनपर्ने पोस्टका लागि पर्सनलाइज्ड गर्न सक्दछन् ।
-फेसबुक डाटा म्यानेज गर्नुहोस् : यो नयाँ प्राइभेसी शर्टकटमा प्रयोगकर्तालाई एउटा मेन्यू प्राप्त हुन्छ । त्यहाँ ट्याप गरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो डाटा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । साथै नयाँ शर्टकटले प्रयोगकर्ताको डाटालाई कसरी कन्ट्रोल गर्दछ भन्ने कुरा पनि फेसबुकले जानकारी दिन्छ । फेसबुकमा प्रयोगकर्ताले अग्रीम रुपमा कन्ट्रोल अप्सन प्राप्त गर्न थालेका छन् । जहाँ प्रयोगकर्ताले फेसबुकले कसरी र कहाँ आफ्नो डाटाको प्रयोग गर्न पाउँदछ भन्ने कुरा तय गर्न सक्दछन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो लोकेसन डाटालाई म्यानेज गर्नुका साथै फेसबुकमा अपलोड हुने सामाग्रीहरु, फेस रिकग्नीसन सेटिंग, तथा एड प्रेफरेन्स जस्ता विषय पनि म्यानेज गर्न सक्दछन् ।
-लगइनका लागि टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन : फेसबुकले प्रयोगकर्ताका लागि एक विशेष खालको सेक्योरिटी फिचर ल्याएको छ, जसबाट तपाइँले पासवर्डका अलावा पनि फेसबुकको अकाउन्टलाई अझै सुरक्षित बनाउन सक्नुहुनछ । यो फिचर भनेको टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हो । उक्त फिचर एक्टिभेट गरेसँगै तपाइँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा लगइन गर्दा आफ्नो मोबाइल वा इमेलमा आउने लगइन कोडको प्रयोग गर्नै पर्दछ । यसो गर्दा अरु मानिसले तपाइँको फेसबुकको पासवर्ड थाहा पाएपनि लगइन गर्न सक्दैन ।
-एप्सका डाटा सिमिति गर्ने : यस फिचरबाट फेसबुकले अन्य एप्सद्वारा रिक्वेस्ट गरिने डाटालाई कम गर्ने कोसिस गरेको छ । यो एप्स अहिले केवल प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल फोटो, नाम तथा इमेल एड्रेसलाई मात्र एक्सेस गर्न सक्दछ । यसका अलावा अरु जानकारीका लागि पहिले सम्बन्धित फेसबुक प्रयोगकर्ताको अनुमति लिनु पर्दछ ।
रिपोर्ट एब्युज : यो फिचरका माध्यमले प्रयोगकर्ताले गत फोटो, भिडियो तथा पोस्टका विषयमा फेसबुकमा रिपोर्ट गर्न सक्दछन् । जब फेसबुकमा कुनै पोष्टको बारेमा उजुरी आउँदछ, तब फेसबुकले त्यसलाई समीक्षा गर्दछ । यदि समीक्षाबाट उक्त पोष्ट कम्पनीको नीति तथा समाजको मापदण्ड भन्दा बाहिर छ भन्ने लागेमा त्यसलाई फेसबुकले हटाइदिन्छ । खुसीको कुरा के भने फेसबुकले यसरी उजुरी गर्नेको पहिचान गोप्य राख्दछ ।
-प्राइभेट कन्भर्सेसन : फेसबुकले हालै आफ्नो मोबाइल तथा डेस्कटप एपमा ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेसनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि केही परिवर्तन ल्याएको छ । एपको केन्द्रमा माथिल्लो भागमा एउटा ग्रुप ट्याबको अप्सन छ । त्यसको सहयोगले ग्रुपको सामाग्री तपाइँको न्यूज फिडमा पहिले भन्दा धेरै देखिनेछ । साथै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई नयाँ ग्रुप खोज्न तथा त्यसमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सुझाव दिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, असार १७, २०७६, ०२:०७:००
मोबाइलफोन ह्वावे वाई सेभेन पी सार्वजनिक
नेपालगन्जमा भायनेटको इन्टरनेट सेवा
बाँकेमा भोलीदेखि ‘क्यान इन्फोटेक’ मेला
नेपालगन्जमा एजुकेशन फेयर
विज्ञान नीति तहगतरुपमै अविलम्वन गर्नुपर्छ: मन्त्री रावल
मगलवार, माघ २१, २०७६ सेतोखरी
समग्र राष्ट्रको उन्नतीका लागि विज्ञान नीति तहगतरुपमै अविलम्वन गरिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले बताएकाछन् । पुरा पढ्नुहोस्
इन्जिनियरलाई व्रिज डिजाइन सम्बन्धि नयाँ कोड अनुशिक्षण
मगलवार, माघ १४, २०७६ सेतोखरी
तीन वटा प्रदेशका इन्जिनियरलाई कंक्रिट ब्रिज डिजाईन अन्तरगत लिमिट स्टेट मेथडको बारेमा नेपालगन्जमा अनुशिक्षण दिइएको छ। पुरा पढ्नुहोस्
बाँके आउन खोज्ने को–को छन् पावरवाला टप ५ एस पी ? आइतवार, जेठ १८, २०७७ 2499